Android ပေါ်ရှိ screenshots များကိုစီမံရန် APP ၏အပိုင်းအစ !! | Androidsis
Android ပေါ်ရှိ screenshots များကိုစီမံရန် APP ၏အပိုင်းအစ !!
ဒီဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်မှာမင်းကိုပြောတဲ့အတိုင်းဒီနေ့ငါကမိတ်ဆက်ပေးချင်တယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal ၏ screenshots များကိုစီမံရန်အတွက် application အပိုင်းအစနှင့်ငါ screenshots တွေ၏စီမံခန့်ခွဲမှု၏ပြောသောအခါငါစုစုပေါင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုလို။
una သူတို့အားဆိပ်ကမ်းများအတွက် - ရှိရမည် app ကိုစင်ကြယ်သော Android နှင့် terminal ၏အများစုသည် အဘယ်သူမျှမဇာတိလုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှိပါတယ်ရာအကြားအလယ်အလတ်အကွာအဝေးနှင့်အနိမ့်အဆုံး ဥပမာအားဖြင့်၊ ရှည်လျားသောဖန်သားပြင်များကိုယူရန်၊ longရိယာကိုဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်မှတ်စုများဖန်တီးခြင်းသို့မဟုတ်သတိပေးချက်များကိုအလွန်ရိုးရှင်းပြီးအလုပ်လုပ်သောနည်းဖြင့်ပြုလုပ်ရန်၊
2 Google Play စတိုးမှ ScreePle Screenshots များကိုအခမဲ့ download လုပ်ပါ
3 Android တွင် Screen Capture များကိုအပြည့်အဝစီမံရန် ScrenPle ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည်
သင့်တွင် Huawei, Samsung သို့မဟုတ် Xiaomi ကဲ့သို့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များမှ terminal တစ်ခုရှိပါက system တွင်အကောင်အထည်ဖော်ထားသောဇာတိလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ အများအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တင်ပြမည့် application နှင့်အောက်တွင်ကျွန်ုပ်အကြံပေးလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင့်တွင် Android သို့မဟုတ်စင်ကြယ်သောအနိမ့်နှင့်အလတ်စားအကွာအဝေးရှိသော terminal ရှိပါကကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သည့်ဤကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ အထူးသဖြင့်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကတရုတ်ဇာစ်မြစ်၏ဆိပ်ကမ်းများသို့မဟုတ်ဆိပ်ကမ်းများရှိလျှင်၊ ဤအပလီကေးရှင်းသည်ဖန်သားပြင်၏စည်းကမ်းချက်များအရသင်၏စက်ပစ္စည်းကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် နှင့်အတူတူပင်၏ post ထုတ်ဝေ။
ကျွန်ုပ်ပြောနေသည့် application သည် ScreenPle Screenshots မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်အရာမဆိုကျွန်ုပ်သည် Google Play Store သို့မဟုတ် Google Play မှအခမဲ့ download လုပ်နိုင်သော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Android အတွက်တရားဝင် application store ဖြစ်လာသည်။
ဤလိုင်းများအောက်တွင်ကျွန်ုပ်သည်သင် app ကိုအခမဲ့ download ရယူရန်အတွက်တိုက်ရိုက်လင့်ခ်တစ်ခုချန်ထားသည်။
Google Play စတိုးမှ ScreePle Screenshots များကိုအခမဲ့ download လုပ်ပါ
Screenple ဖမ်းယူခြင်းနှင့် Screen Recorder
Android တွင် Screen Capture များကိုအပြည့်အဝစီမံရန် ScrenPle ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည်
ဒီဆောင်းပါးရဲ့အစမှာသင့်ကိုငါထားခဲ့တဲ့ဗွီဒီယိုထဲမှာ၊ ဒီအပလီကေးရှင်းကကျွန်တော်တို့ကိုပေးမယ့်အရာအားလုံးကိုအသေးစိတ်အသေးစိတ်ပြသမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ရိုက်ကူးသည့် screenshots များကိုဘက်စုံစီမံခန့်ခွဲမှု.
ကျွန်ုပ်တို့ Android ကိုထည့်သွင်းမည့် application ၏ရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်မှုနှင့်အတူလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အချို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များ သူတို့များသောအားဖြင့် high-end ဆိပ်ကမ်းများယူဆောင်လာသည်နှင့်အမျှလုပ်ငန်းဆောင်တာများထပ်တိုးလာသည် ဥပမာ Samsung သို့မဟုတ် Huawei ၏အထင်ကရအသစ်များ
Android screenshots များကိုစီမံခန့်ခွဲရန် ScreenPle ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောအဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များကိုစာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
စနစ်တွင်လုံး ၀ ပါဝင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာ၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်မော်ဒယ်ကိုသတ်မှတ်ထားသောသက်ဆိုင်ရာခလုတ်များနှင့်အတူမျက်နှာပြင်ကိုရိုက်သည့်အခါပေါ်လာသည်။ ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရပေါင်းစပ်မှုသည်များသောအားဖြင့် Volume အနုတ်ပေါင်းပါဝါခလုတ်ဖြစ်သည်။
ဖန်သားပြင်များကိုစုစည်းရန် tag ထည့်နိုင်သည်။
WhatsApp၊ Telegram နှင့်ကဲ့သို့သောဝက်ဘ်စာမျက်နှာများသို့မဟုတ် chats များကိုဖမ်းယူရန်အတွက်အလွန်ရှည်လျားသောမျက်နှာပြင်ရိုက်ကူးမှုများအတွက်လုပ်ဆောင်မှုသည်အလွန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအရည်အသွေးမြင့်မားသောရလဒ်များနှင့်ထူးခြားပြတ်သားသော resolution ကိုပေးသည်။
အခမဲ့မှတ်ချက်များပြုလုပ်ရန်၊ စာသားထည့်ရန်၊ ဂျီ ometric မေတြီကိန်းဂဏန်းများနှင့်အခြားအရာများကိုထည့်သွင်းရန်တည်းဖြတ်သူအပြည့်အဝရှိသည်။
Application တစ်ခုချင်းစီ၏ထိပ်ဘက်တွင်ဖော်ပြသော floating ခလုတ်ကိုထည့်ရန်ရွေးစရာတစ်ခုက၎င်းကိုနှိပ်ရုံနှင့်တစ်ချက်နှိပ်ပါ။
သင်၏ဖမ်းယူမှုအားလုံးကို Google Drive တိမ်တိုက်ထဲ၌အခမဲ့သိမ်းဆည်းရန်ရွေးချယ်မှု။
Home ခလုတ်ကိုကြာမြင့်စွာနှိပ်ရုံဖြင့်စခရင်ရိုက်ကူးခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေ။ (ဤရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်သည်အက်ပ်ကိုပုံမှန်လက်ထောက်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်)
လျင်မြန်သောဖန်သားပြင်များကိုယူရန်သို့မဟုတ်သတိပေးချက်များကိုဖန်တီးရန်အတွက်အမြဲတမ်းသတိပေးချက်ကိုဖွင့် / ပိတ်ရန်ရွေးချယ်မှု။
ဤအရာအလုံးစုံအတွက်နှင့်ကျွန်ုပ်ပူးတွဲပါဗွီဒီယိုတွင်ပြသထားသောအရာအားလုံးအတွက်ကျွန်ုပ်မကူညီနိုင်ပါ Screenshots တွေကိုစီမံဖို့ဒီ application အပိုင်းကိုအကြံပေးပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ကိုယူဆောင်လာပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန်ကူညီပေးသောအကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Android ပေါ်ရှိ screenshots များကိုစီမံရန် APP ၏အပိုင်းအစ !!